That's so good, right?: February 2013
Posted by Alex Aung at 12:39 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 10:38 PM No comments:
လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေလည်း ‘သဇင်’ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကတော့ ကျွန်တော့်ကိုတင်းကြပ်စွာထွေးဖက်ထားမြဲ။
‘မောင်...သဇင့်ကွယ်ရာမှာ နောက်ချစ်ဇတ်လမ်းအသစ်မထွင်ရဘူးနော်....နော်မောင် ....ကတိပေးကွာ’ သူမ တတွတ်တွတ်နှင့် ပြော နေတာ တစ်မနက်ခင်းလုံးနီးပါးပါပဲ။
‘မောင်ပြောပြီးပြီလေကွာ ခဏခဏ’ သူမဆံပင်လေးတွေကို သပ်ပေးရင်း ကြင်ကြင်နာနာပြန်ပြောရတာပေါ့။ သူမလုပ်တာနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အဝေးသွားဖို့အရေး မစတင်နိုင်သေးပါဘူး။ ‘စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ခရီးလေးတစ်ခု သက်သက်လေ သဲရာနော်။ ဒီထက်မပိုဘူး ယုံ နော်။ မောင်က ကွယ်ရာမှာ ခြေပုန်းခုတ်တတ်တဲ့လူစားထဲ လုံးဝမပါပါဘူးကွာ....အိုကေနော်’
သဇင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး အချိန် အတော် ကြာ ကျွန်တော့်ကိုထွေးဖက်ထားပြီးမှ မလွှတ်ချင်လွှတ်ချင်နဲ့ လက်တွေကို ဖြည်တယ်။ ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် အနမ်းဖွဖွပေး ပြီးမှ ကျွန်တော်သူမနှင့်ဝေးရာကို ခြေစလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ခပ်သွက်သွက်လေးသွားပြီးကာမှ Good Bye! သဘော သူမကိုလှည့်ကြည့်ကာ လက်ဝှေ့ရမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူမကလည်း ပြန်ပြီးလက်ဝှေ့ရမ်းပြသည်ပေါ့။ သူမကို တစ်ချက်အကြည့် ကျွန်တော့်စိတ်အာရုံထဲ ၀ယ် တစ်ခုခုကိုစိုးကြောက်လာသည့်အလား ခံစားရမိကာ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရာ နားနေခန်းဆီပြန်ပြေးသွားရင်း သူမကို အနမ်းသွက် သွက်တစ်ချက်ပေးဖြစ်ရတယ်။
‘သဲကို မောင်ချစ်တယ်ဟုတ်ပြီလား! ဟိုကိုရောက်လို့အ၀တ်အိတ်ချပြီးတာနဲ့ ဖုန်းဆက်မယ်နော်’
ကျွန်တော်ချာကနဲလှည့်ကာ လေယာဉ် ရှိရာဆီချက်ချင်း အပြေးလေးပြန်လှည့်သွားရပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ် သူမ ငိုကြွေးလုဆဲဆဲဖြစ်နေပြီဆိုတာရယ် ကျွန်တော်သူမရဲ့ ငိုကြွေးသံကို လုံးဝနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာရယ်ပေါ့။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့ ကိုယ့်နေရာကိုယ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးနောက် သူမပြောခဲ့တာတွေကို အတွေးနက်မိပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ် ယောက်ယောက်နှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားမှာကို ဘာကြောင့် အရမ်းစိုးရိမ်နေရတာလဲ သူမတစ်ယောက်တည်းကိုသာ ကျွန်တော်ချစ်နိုင်ခဲ့တာ သိနေသားနဲ့လေ။ ဒီ့ထက်ပိုတဲ့ တပ်မက်မှုတွေကို ပိုမိုစွဲလမ်းနေပြီလားလည်း တွေးမိပါတယ်။ လေယာဉ်စီးရတာတော့ အတော်အဆင် ပြေသားပဲ။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းကအသစ်ဆိုတော့ ၀န်ဆောင်မှုကိုအထူးဂရုစိုက်ဟန်တူပါရဲ့။
မကြာခင် နေရောင်ခြည်ဖြာနေတဲ့ ရွှေမြို့တော်ကိုရောက်တော့မှာပါ။ လေယာဉ်က အစီအစဉ်တကျပျံသန်းပါတယ်။ ချောချောမွေ့မွေ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ။ တော်တော့ကို အလုပ်များတဲ့ လေဆိပ်မြင်ကွင်းကို ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတွေဘေးဝန်းကျင်မှာထူထပ်လို့။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေက အမျိုးသမီးတွေရော၊ အမျိုးသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ရွေ့လျားကြည့်မိတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် လိင်ခွဲခြားမှုဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ကျွန်တော့်ဆီမှာ မရှိခဲ့ဘူး။ ဘဲတွေရဲ့ တင်သားဆိုင်ခပ်ကြပ်ကြပ်တွေက စော်တွေရဲ့ pussy တွေလို အရသာကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာပဲမဟုတ်လား။ တစ်ခါတလေ လိင်ဆက်ဆံဖက်အဖြစ် အမျိုးသားတစ်ယောက်လောက် တောင့်တမိပါတယ်။ ‘ဟူး.....’ မမာ့တမာဖြစ်လာတဲ့ ကျွန်တော့် ငပဲကို ဘောင်းဘီထဲအသာနေရာခိုးချလိုက်ရင်း luggage ရွေးတဲ့ဆီသွားမိရော။ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားသွားနေတဲ့ အိတ်တွေထဲ ကျွန်တော့်အိတ် ကိုမြင်လိုက်ရတော့ ခပ်သွက်သွက် အိတ်ရှိရာဆီလှမ်းလိုက်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော့်အိတ်နှင့် ဒီဇိုင်းတူအိတ်ကရောက်လာသေး။
‘Excuse me!’ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက အသံပြုလိုက်ရပါတယ်။ ‘ဒီအိတ်က ကျွန်တော့်အိတ်ပါ’
‘အိုး......ဆောရီး၊ ကျွန်မ ဒီကိုအခုမှရောက်ဖူးတာဆိုတော့ နည်းနည်းလန့်နေတာနဲ့’ သူမလေသံကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ ချစ်စရာကောင်း သော ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို အလည်အပတ်လာရောက်သူဆိုတာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူမတစ်ကိုယ်လုံးကို အပြန်အလှန် အပေါ်အောက် မသိမသာကြည့်မိရဲ့။ သူမဟာ ဥရောပဟန်အပြည့်နှင့် အရှေ့တိုင်းလိုဆံပင်နက်နက်နဲ့ဆိုတော့ ဘာလူမျိုးလည်းမသိ ပေမဲ့ ကြည့်ကောင်းလွန်းတဲ့ရုပ်ရည်ပိုင်ဆိုင်သူပါ။ သူမကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံဖွံထွားထွားတွေက ကျွန်တော့်ညီဘွားကို တဆတ်ဆတ်ခါစေ သား။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်ခုန်တတ်ခဲ့တဲ့ ဥရောပသူတွေရဲ့ လှပမှုမျိုးဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုအတော်စွဲဆောင်နေတယ်။ သူမက ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြတယ်လေ။
ကျွန်တော်ဘာတွေးနေလည်းဆိုတာ သူမရိပ်မိသားပဲ။ ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ကို ရှေ့ထုတ် ကိုယ့်ကိုယ် ကိုပဲ မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ ‘Hi, I’m Bruce’ သူမက ရှက်ရွံ့ရိပ်မကင်းတဲ့ဟန်နှင့် ကျွန်တော့်လက်ကိုစွဲကိုင်လှုပ်ရမ်းတယ်ပေါ့။
‘Hello Bruce, I’m Victoria’ သူမပါးပြင်တွေက ပန်းသွေးရောင်သမ်းနေသေးတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်ခုခုဝင်မွှေသွားသလားခံစားရ ပါတယ်။ အခုမှမိတ်ဆက်ရပေမဲ့ သူမကို ကျွန်တော် တည်းခိုရာစီကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့အထိစိတ်လောမိရော။ ဘယ်နေရာ သို့မဟုတ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူမရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလှပတဲ့ နောက်ပိုင်းတင်သားတွေထဲ ကျွန်တော့်ငပဲတုတ်တုတ်ကြီးကို မြှုပ်ထားချင်လိုက်တာ။ မတော် သူမ ဆေးရုံရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ် ဟဲ....ဟဲ။ ‘Victoria, တော်တော်လှတဲ့ နာမည်လေးတစ်ခုပဲဗျ’
‘ကျေးဇူး’ သူမက ကျေးဇူးစကားဆိုပြီး ကျွန်တော့်အိတ်နှင့်ဆင်တူ သူမရဲ့အိတ်ကိုညွှန်ပြတယ်။ ‘ကျွန်မအိတ်’ ကျွန်တော်အလိုက်တသိ ဆွဲယူပြီးပေးလိုက်တယ်။ ဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့အလိုက်သိမှုဆိုပေမဲ့သူမနည်းနည်းတွေဝေသွားဟန်တော့ရှိပါ့။ သူမကလည်း သူမအိတ်ကိုလှမ်း ကိုင်ထားတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်လက်နှင့်မထိတထိပေါ့လေ။
သူ့ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးနှင့် မွှေးပျံ့နုညံ့မှုကို သူ့လက်နှင့်ထိခတ်မှုတစ်ချက်မှာ ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီလက်လေးတွေ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာ ပွတ်သပ်ဆော့ကစားရင် ဘယ်လိုများခံစားရမှာပါလိမ့်......ရှီး..။ ‘ဒီအနီးအနားမှာပဲ တည်းခိုမှာလားဗျ’ ကျွန်တော် ခပ်တိုးတိုးမေးလိုက်တယ်။ ‘အိုး....ဟုတ်တယ်၊ Jasmine Hotel မှာ ကျွန်မ booking လုပ်ထားပြီးပြီ’ လို့ဖြေတော့ ကျွန်တော်က ‘ဟာ....အဲ့မှာ ကျွန်တော်တည်းမှာ’ လို့လိမ်လိုက်မိရော။ ‘ကျွန်တော်တို့ ကားအတူစီးသွား လို့ရတာပေါ့နော်’ ‘အင်း....အဆင်ပြေတာပေါ့ရှင် အဲဒီဟိုတယ်နေရာကို သိပ်မညွှန်းတတ်တာနဲ့အတော်ပဲ’ ‘အဲဒါဆိုသွားကြစို့လေ’ ကျွန်တော်သူမကို အရေးဆိုတော့ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို သူမက ဖမ်းချိတ်လိုက်ရင်း လေဆိပ်အပြင်ဘက်ကို ထွက်ခွာဖို့စတင်ကြ တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် Taxi တစ်စီးငှားရင်း ဟိုတယ်ရှိရာကို မောင်းခိုင်းလိုက်တယ်။ စီးရတဲ့ ခရီးက တိုတောင်းလို့တော်ပါသေးရဲ့။ သူမ နံဘေးမှာ ထိုင်နေရတာ ကျွန်တော့်စိတ်ဆန္ဒတွေဟာ ပြင်းပျသထက် ပြင်းထန်လာတာ မနည်းဖုံးကွယ်ထားနေရတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Victoria က...သူမက သတိမထားမိတာလား သို့မဟုတ် ဂရုမစိုက်တာလားမသိ ကျွန်တော့်အနီးကို ပိုပိုတိုးကပ်ပြီးထိုင်တယ်။ ထဲရောက် တော့ သူမကို ခဏစောင့်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်တို့အခန်းတွေအခြေအနေသွားကြည့်တာပေါ့နော်။
‘ကောင်းသတင်းရော၊ မကောင်းသတင်း ရောပါတယ’် လို့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့ သူမကိုပြောလိုက်တယ်။
‘တစ်ခုခုမှားနေလို့လားဟင်?’ သူမက အသံချိုချိုနှင့် ပြန်မေး တယ်ဗျ။
‘ခင်ဗျားအခန်းကတော့ အသင့်ဖြစ်နေပြီဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းတွေနေရာချဖို့ အဆင်မပြေ သေးဘူး၊ အခန်းတစ်ခန်းရဖို့ ကျွန်တော်ခဏစောင့်ရဦးမယ်’
သူမက ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်လိုက်ပြီး ‘ကျွန်မအခန်းမှာခဏအနားယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခန်းရဖို့စောင့်ရင်း ကျွန်မအခန်းမှာ ခဏနေလို့ရတာပေါ့ရှင်’
သူမရဲ့ မခို့တရို့အပြုံးဟာ ဖိတ်ခေါ်ချက်ပြုနေခြင်းပါပဲ။ ကျွန်တော် သိခဲ့ပြီ နှစ်ဦးသားစိတ်ထဲ တစ်ခုခုကို ပြင်းပြင်းပျပျရှိနေတယ်ဆိုတာ ကို။ ကျွန်တော်သူမခါးကို ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်နှင့်သိုင်းဖက်ကာ အပေါ်ထက်တက်ရာလှေကားရှိရာကိုရွေးကြပါတယ်။ သူမအခန်း ထဲကို ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးလျှင် ၀င်ပြီးခြင်း သူမက အချိန်မဖြုန်းတော့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေစတင်တော့တာ။ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို သိုင်းဖက်ပြီး လော့ခ်ျပြုလုပ်ပြီးစ တံခါးရွက်မှာ ကျောကပ်စေတာပါ။ သူမနှုတ်ခမ်းတွေဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို အားပြင်းပြင်းနှင့် နမ်းစုပ်တာ များ မွတ်သိပ်ပြင်းပျစွာနှင့်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကလည်း ခပ်ပါးပါးအပေါ်အင်္ကျိကနေ လျှံကျနေတဲ့ သူမရဲ့ရွှေရင်အစုံကို ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ် လိုက်ရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ရှာဖွေလိုက်တယ်။ နုနုညံ့ညံ့လေးနှင့် တရွရွဆိုသလိုနို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိတော့ သူမနှုတ်ဖျား က ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ထွက်လာသလို ကျေလည်းကျေနပ်ပုံရတာများ....အင်း..။ ကျွန်တော့်လက်တွေက တဖြည်းဖြည်း သူမအောက်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ဆီ ခရီးစတင်ထွက်ရင်း သူမ စကတ်အနားစဆီ လက်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူမ ဖမ်းကိုင်ရပ်တန့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက အနမ်းကိုရုတ်သိမ်းပြီးနောက် ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်သွားရဲ့။ ‘အင်း....အဲဒီမှာ ရှင်သိဖို့ကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်’ သူမက ခပ်တိုးတိုးစကားဆိုတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို သူ့အညိုရင့်ရောင် မျက်လုံးတွေနှင့် စိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ခပ်တိုးတိုးလေသံနှင့်အတူ တစ်လုံးခြင်းတစ်စုံ တစ်ရာကိုပြောပါရော ကျွန်တော်သတိမမူမိခဲ့တဲ့အရာ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ကျောက်သားလို မာတောင်နေပြီဆိုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဟာ လွင့်ပျံနေမိလို့နေမှာ။ ‘အဲဒါဘာ?’ ကျွန်တော် သူမကိုဆွဲကပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ခွဆုံကို သူမပေါင်ခြံဆီဖိလိုက်ပါတယ် ဆက်ပြီး တော့။ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့မာတောင်မှုအပေါ် ဖီလင်တက်စေချင်လို့ပါ။ ခပ်မြန်မြန်ပဲ သူမကကျွန်တော့်ကိုတွန်းထုတ်တယ်။
အဲဒီအချိန်...အဲဒီအချိန်ခဏလေးမှာ ကျွန်တော်တွေဝေသွားမိတယ်ဗျ။ ခပ်မာမာအရာတစ်ခုက ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကိုပြန်ထောက်လိုက် သလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်သူမပေါင်နှစ်ခုကြားကို လက်နှင့်ဆွဲကိုင်လိုက်တယ်။ သူမနောက်ကို ခုန်ဆုတ်လိုက်သော်လည်း နောက်ကျသွားပါပြီ။ ကျွန်တော် သူမလျှို့ဝှက်ချက်ကို ခံစားမိခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်သိတယ်။ သူမ ကျွန်တော်နှင့်မျက်နှာခြင်းမဆိုင်တော့ဘဲ ပြတင်း ပေါက်ကိုမျက်နှာမူနေပြီး ‘ရှင်ထွက်သွားချင်ပြီဆိုတာ နားလည်ပါတယ်’ သူမက တုန့်ဆိုင်းဆိုင်း စကားဆိုတယ်။
ကျွန်တော်တစ်ခါမှ transsexual တစ်ယောက်ကို မမြင်ဖူးခဲ့ သူမလိုပုံစံမျိုးကိုလေ။ ယောက်ျားလိင်တံပါသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့် လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အင်း...ဘယ်တော့မှမရနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းမျိုးက အခုလက် တစ်ကမ်းမှာလို့တွေးမိပါရဲ့။ သူမကို ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် သူမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို မသိနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ငပဲက အပြင်းအထန် တောင့်တနေတယ် ငြင်းဆန်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ သူမရှိရာကို ကျွန်တော်တိုးကပ်သွားလိုက်ပါတယ်။ သူမအနားရောက်တော့ ‘မင်းလိုမျိုးတစ် ယောက်နှင့် တစ်ခါမှ မပတ်သက်ခဲ့ဖူးဘူး, ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ကိုယ့်မလုပ်ချင်ဘူးလို့ မဆိုလိုဘူးလေ’ လို့ငြင်ငြင်သာသာပြောလိုက်တာပေါ့ နော်။ သူ့မျက်လွှာတွေ ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုပင့်အကြည့် ကျွန်တော် သူမကိုဆွဲဖက်လိုက်ပါတယ်။ သူမကလည်း ကျွန်တော့်ကို ကျစ်ကျစ် ပါအောင် ပြန်ဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းများကို မွတ်သိပ်စွာအနမ်းပေးပါပြီ။ သူမလျှာက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲတိုးဝင်လာချိန်မှာ ကျွန်တော့်လက်တွေက သူမပေါင်ခွဆုံစီရွေ့သွားပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ သူမဆွဲမဖယ်တော့ပါ။ သူမခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကို ပိုမိုပူးကပ်စရေဲ့။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို သူမစကပ်ထဲလျှောသွင်း သူမပင်တီထဲနှိုက်ကာ ခပ်မာမာ သူမ့ငပဲကို စမ်းသပ်လိုက်တယ်။ အရေကြည် တစ်ချို့စို့ထွက်နေတာမှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အင်း...တစ်ကိုယ်လုံးခပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းလှုပ်ရှားသွားသလိုပဲ။ ကျွန်တော် ကြမ်းပြင်ကော်ဇောပေါ် လှမ်းတက်လိုက်ကာ သူမခါးအစုံကိုကိုင်လိုက်တော့ သူမက စကပ်ကို အပေါ်ဆွဲတင်ပြီး လုပ်လက်စကိုအစပြုဖို့ခွင့်ပေးပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်သူမရဲ့ ပိုးအတွင်းခံဘောင်းဘီကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။သူမကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို မြင်လိုက်ရတဲ့ခဏ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းတွေဟာ ပြူးကျယ်သွားမိတယ်ပေါ့နော်။ သူ့ပစ္စည်းဟာ သေးပေမယ့် ခပ်တုတ်တုတ်ပုံစံမျိုးဆိုသလိုပဲ။ သူမမျက်နှာကိုမော့ကြည့် လိုက်တော့ အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်နှင့် လှုပ်နေသော ရွှေရင်နှစ်မွှာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်ရပါတယ်။ နှစ်ဦးသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် တွေပြည့်ဝဖို့ပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးကာ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကိုမှိတ် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သိပ်မရှည်တဲ့ သူမပစ္စည်းကို ဆွဲမျိုလိုက်တယ်။
‘အင်း.....yes….yes!’ သူမပစ္စည်းကို ပညာစွမ်းပြတိုင်း သူမနှုတ်ဖျားက ညည်းသံထွက်ထွက်လာပါတယ်။
ကျွန်တော် သူမရဲ့ပစ္စည်းကို ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်းပြုပြီး ပိုပိုကစားတိုင်း သူမခန္ဓာကိုယ်က ပိုပိုတုန်ခါလာသလိုပဲဗျ။ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်း ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းကိုင်ကာ သူမတင်ပါးတွေကို ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်လုပ်ပြီး ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထိုးထိုးထည့်တယ်။ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူမဖေးကိုင်ထားပုံက နုညံ့သလို ကျွန်တော့်စုပ်မှုတ်မှုဟာလည်း ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းပေါ့။ ခဏနေတော့ သူမ တင်ပါးတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ဆုလာဘ်အဖြစ် ပျစ်ချွဲချွဲအရည်တွေ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲဖြည့်ပေးပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အသာငုံထားရင်း မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ သူမနှုတ်ခမ်းတွေကို ငုံခဲလိုက်တယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ခပ်ဟဟဖြစ်လာတဲ့ သူမပါးစပ်ထဲကို သုတ်ရည်တွေထည့်ပေးလိုက်ပြီး သူမအရည်ကို သူမ အရသာခံ မြည်းစမ်းစေလိုက်သည်ပေါ့နော်။ သူမလျှာဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ အာခေါင်တွေထဲ တိုးဝင်မွှေနှောက်ပြီး လက်ကျန်အရည်များရှိမလား ရှာဖွေသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှုတ်ခမ်းတွေ ဂဟေဆက်နေတုန်း ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီခါးပါတ်ကို လျောချွတ်လိုက်ကာ ဘောင်းဘီကိုခြေရင်းပုံချလိုက် တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာ boxer ဘောင်းဘီကလွဲလို့ ဘာအ၀တ်မှမရှိတော့။ ဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းက ဖုဖုဖောင်းဖောင်းနှင့် ငပဲက လည်း အရမ်းမာနေတာများ တွင်းအောင်းဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ မြွေပွေးကြီးတစ်ကောင်လိုပါပဲ။ နှစ်ဦးသား ပူးကပ်သွားရင်း ခုတင်ခြေရင်းက အ၀တ်ဘီရိုပုလေးဆီ နောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်နဲ့ကပ်သွားကြတယ်။ က စားပွဲပုလေးရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ညီမှာ တက်ထိုင်ကာ သူမခြေ ထောက်တွေကို ကျွန်တော့်ခါးမှာချိတ်လိုက်တယ်လေ။ သူမခြေထောက်တွေကို အပေါ်ကိုမြှောက် ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ကာ သူမတင်အစုံကို အသာဖြဲကိုင်လိုက်ရော။ သူမကလည်း ပြင်းပြင်းပြပြ ဆန္ဒရှိသလို ကျွန်တော်ကလည်း condom ကိုစွပ်ပြီးတာနှင့် ခပ် ကြမ်းကြမ်းပဲ ခရေ၀ထဲဖိသွင်းပစ်တယ် ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကိုပေါ့။ သူမ ခရေ၀က ထင်သလောက် မကျယ် ကျွန်တော့်ဆောင့်သွင်းချက် တွေထဲ ခပ်မြန် မြန်ပဲအသားကျသွားတယ်။ သူမနှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံထွက်လာတာ အသံက ကျယ်တော့ နာကျင်လို့ သို့မဟုတ် အဲဒါလေးကို တပ်မက်လို့များလားပဲ စဉ်းစားမိသေး။ ကျွန်တော်ကတော့ အိပြီးဖောင်းကားနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးရဲ့ရင်သားထက် လှပတဲ့ ရင်သားကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်။ သူ့ခရေ၀ထဲ ငပဲကိုဆောင့်ဆောင့်သွင်းနှင့် သိပ်ကိုကြိုးစားပစ်တယ်ပေါ့။ သူမကလည်း ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို ဆွဲခိုထားသလို တင်ပါးကိုမြှောက်မြှောက်ပြီး ပြန်ပြန်ဖိချတယ်လေ။ ငရုတ်ဆုံနှင့် ငရုတ်ကျည်ပွေ့လိုပါပဲ ငရုတ်သီး ကတော့ ညက်လှပြီ။
ခံစားနေရတဲ့ ဖီလင်က ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်ငြိမ့်ပါတယ်ဗျာ။ ကြာရှည်သိပ်မဆွဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ မိနစ်နည်းနည်းကြာပြီးနောက်မှာ တော့ အရှိန်မပျက်ဆောင့်သွင်းနေရင်းမှာပဲ အဆုံးစွန်ထိကိစ္စပြီးမြောက်သွားပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကျွန်တော်တစ်နာရီလောက်ဆွဲမယ် ဆိုဆွဲနိုင်တယ်လေ။ အခု ကျွန်တော် ပင်ပန်းနေတာ သူမသက်သာသွားတယ်။ကျွန်တော်ခပ်ဖြေးဖြေးဆွဲချွတ်ကာ condom ကို အမှိုက် ခြင်းထဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။
"အတော်ကောင်းတာပဲရှင်" သူမ ဘီရိုပုလေးပေါ်ကလျောဆင်းလိုက်ရင်းပြောတာပါ။ သူမ ကျွန်တော့်ဆီ လျှောက်လျှမ်းလာပြီးနောက်ဘက်ကနေသိုင်းဖက်လိုက်တယ် သူမရင်သားအိအိထွေးထွေးတွေနှင့် ဖိကပ်ရင်းပေါ့လေ။ ကျွန်တော့်တင်ပါး တွေမှာ ဖိကပ်နေတဲ့ သူမငပဲက တဖြည်းဖြည်းမာလာသလို ခံစားရသား။ အံ့သြသွားတယ် ဒီလိုဖိကပ်ခံရတာကို ကျွန်တော့်ငပဲက သဘော ကျသလို ရုတ်တရက်တုန့်ပြန်တယ်။ များသောအားဖြင့် ငနဲတွေနှင့် လိင်ဆက်ဆံဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း အမြဲလို Top နေရာကပဲ နေခဲ့တာ ပါ။ သူမရဲ့ရင်သားတွေက နောက်ကျောပြင်ကို ထိကပ်ပွတ်သပ်နေတာ ကျွန်တော့်ကို သက်သက်မဲ့ နှိုးဆွနေသလိုပါပဲဗျာ။ Victoria က ကျွန်တော့်ကိုနောက်ကသိုင်းဖက်ထားရင်း သူမလက်တွေနှင့် ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်တယ်။ ‘Mmmm….stop!’ ကျွန်တော်ငြင်းဆန်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် နှုတ်ဖျားက စကားလုံးတွေဟာ လမ်းတစ်ဝက်မှာတင်ရပ်တန့်သွားတယ်လေ။
‘ရှူး...ဘေဘီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင်းမထားစမ်းပါနဲ့’ သူမကကျွန်တော့်နားရွက်နားခပ်တိုးတိုးပြောရဲ့။ ‘ခံစားမှုလေးတွေ လွင့်မျောသွား အောင် လုပ်ပေးပါရစေရှင်....’ သူမ ငပဲကို ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံထဲဖိကပ်လိုက်တာလည်းလုပ်သလို စကားပြောတာလည်းလုပ်သေးတယ်။ ကျွန်တော်မျက်ဝန်းတွေ ကို မှေးမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ မာကျောကျောအရာတစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေရဲ့ကြား ခရေ၀ ထဲတိုးဝင်လာတာပါ။ အဲဒါက သေးငယ်တင်ထင်ရပေမဲ့ ကျွန်တော့်အပျိုရည်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့ကောင်းကောင်းလုံလောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အစပိုင်းတော့ တွန့်သွားမိ ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း ချောဆီနှင့် အတူ နစ်နစ်ဝင်သွားတာကြောင့် နောက်ကိုပြန်ပြီး အလိုက်သင့်ဖိဖိပေး မိရော။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ rhythm မိသွားကာ သူမရဲ့ ခပ်ဖြေးဖြေးဆောင့်သွင်းချက်များနှင့်အတူ ကခုန်မိကြပါတယ်။
‘အား....အ...အာ’ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်သွင်းချက်များကို အချိန်မဆိုင်းဘဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်စိတ် တွေ ထိန်းချုပ်မှုမဲ့ကာ ပိုပိုပြီးလိုချင်လာတယ် ဆောင့်သွင်းချက်ပြင်းပြင်းတွေကိုပေါ့။ ပိုးသားလိုနုညံ့နေတဲ့ သူမလက်ချောင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲကို တပြိုင်တည်းလို ပွတ်သပ်လှုပ်ရှားပေးပါတယ်။ သူမရဲ့ ငြင်သာတဲ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေကို အလားတူ ပွတ်သပ်ပေးနေချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ထိန်းချုပ်ထားသမျှ အကုန်လွတ်ထွက်ကုန်ပါပြီ။ သုတ်ရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ကနေ ဖွေး ကနဲ ဖွေးကနဲပါပဲ ထွက်တာများ အားရစရာပါ။
နှစ်ဦးသားလှုပ်ရှားမှုမရှိ ခဏငြိမ်သက်မိကြတဲ့ အချိန်လေးမှာ ကျွန်တော်တွေးမိရတာက အားလုံး....ဟုတ်တယ်....အတွေ့အကြုံအားလုံး စုံသွားပြီလို့လေ။ နောက်တော့ သူမရဲ့တင်ပါးတွေဟာ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားလာကာ အထုတ်အသွင်း မြန်သထက်မြန်လာပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ချားရဟတ်စီးသလို ခံစားရကာ တစ်စုံတစ်ခုကို ဆွဲကိုင်ဖို့ရှာဖွေမိတာ ဘာမှမတွေ့တော့ အိပ်ယာပေါ်မှောက်ချ လိုက်ပါတယ်။ သူမကလည်း နောက်ကထပ်ချပ်မကွာလိုက်ပါလာပြီး သူမရဲ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ မြှုပ်နှံလေသတည်းပေါ့။ ကျွန်တော် မလှုပ်မရှားငြိမ်သက်မိချိန်မှာ သူမကတော့ ခပ်ပြင်းပြင်းလှုပ်ရှားမှုတွေနှင့် tempo မြင့်နေပါပြီ။
‘Fuck, Fuck, Fuck!’ သူမနှုတ်ဖျားက မထိန်းနိုင်စွာအော်ညည်းလာသလို သူမခန္ဓာကိုယ်ကလည်း တုန့်ပြန်လာပြီပေါ့။
သူမရဲ့ ငပဲသွေးကြောတွေ လှုပ်ရှားမှုမှတစ်ဆင့် သူမ ခံစားမှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုသိလိုက်ရတယ်။ ပူနွေးမှုကို မခံစားရပေမဲ့ သူမ သုတ်ရည် တွေကို အတွင်းထဲမှာ စွန့်ပစ်လိုက်ပြီပေါ့။ အား.....သူမသုတ်ရည်တွေ ကျွန်တော့်သွေးကြောတွေကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး စိမ့်ဝင်စီးဆင်းသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ သူမကတော့ အကုန်အစင်ကို ကော့ကော့ပြီး ပန်းထည့်နေတာပါပဲ။ ပန်းထုတ်နေတာ ရပ်မှ တကယ့်ကိုဖြေးဖြေးလေး ခရေ၀ထဲက သူ့ငပဲကိုဆွဲထုတ်တယ်။
‘အိုး.....အတော်မိုက်တဲ့ခံစားမှုလေးပဲဗျာ’ ကျွန်တော်အိပ်ယာပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲနေရင်းပြောမိရပါတယ်။
‘No, No အချစ်လေးရေ ဒါက အစပျိုးတာသက်သက်ပဲရှိသေးတာ’ တဲ့ သူမက စကားအမှန်ကိုတည့်ပေးလေရဲ့။
Alex Aung (4 Aug 2012)
Note: ဒီဝတ္ထုလေးကို ပရိသတ်ကမေတ္တာထားကြပါတယ် မကြိုက်ကြပါဘူးတဲ့။ တစ်ခါတလေ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာလေးတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝရှိတာမို့ရေးကြည့်လိုက်တာလေးပါ။ အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်နော်….။
Posted by Alex Aung at 10:07 PM 1 comment: